DOWNLOAD Howard 500-105 FS2004
Nohavaozina taminy Martsa 6, 2009: Fanampiny freighter pirinty, Martsa Aircraft.cfg, boky fampianarana PDF
Old fiaramanidina. Beautiful modely sy noho ny mpanoratra.
Ny feo dia tsara indrindra izany. Cockpit (2D sy 3D), trano fialan-tsasatray (mahafinaritra fisaintsainana), Ultra feno tontonana, impeccable sidina modely. Ultra mora raisina (miezaka tarehimarika!), Ny 500-105 dia fehezin'ny ny rantsan-tànan'Andriamanitra sy ny maso.
Ho hitanao eo ambanin'ilay mpanamboatra izany: Howard Aero, Inc .. Andramo!
izany add-on dia nahazo Award Developim Developers